प्रवीण खतिवडा | गृहपृष्ठ
Home प्रवीण खतिवडा
प्रमुख (पीयूबीसी), सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि
टाटा नेपाली माटो तथा बाटो सुहाउँदो छ
टाटा प्यासेञ्जर कारको नेपाली बजार कस्तो छ ?
प्यासेञ्जर कारमा टाटा नेपालमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालमा विक्री हुने कुल सवारीसाधनमा टाटाको बजार हिस्सा २० देखि २५ प्रतिशत छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा नयाँनयाँ प्रडक्ट ल्याइरहेको छ । अहिले पनि नानो कारदेखि आर्याजस्तो उच्चस्तरको गाडी विक्री गर्दै आएका छौं । सुविधाअनुसार हामीसँग ८ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्मका गाडी उपलब्ध छन् । डिजेट र पेट्रोल दुवै प्रकारका कार टाटासँग मात्र रहेका छन् । नेपालमा अन्य कम्पनीका कारमा यस्तो विशेषता पाइँदैन । टाटा नेपाली माटो तथा बाटोसुहाउँदो छ । त्यस्तै नेपाली उपभोक्ताको पहुँचमा रहेका कारण पनि नेपालमा टाटाको बजार हरेक बर्ष बढ्दै गएको हो ।
नेपाली ग्राहकले कुन रेञ्जका टाटाका गाडी मन पराएका छन् ?
कार सेग्मेण्टमा हेर्दा अहिले इण्डिकालाई नेपालमा धेरैले मन पराएका छन् । यो नेपालमा भर्खरै सार्वजनिक भएको डिजेल कार हो । फुल अप्शनसहित नेपाली बजारमा यसको मूल्य १७ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । सस्तो मूल्यमा बढी माइलेज दिने कार भएकाले पनि धेरैको रोजाइमा इण्डिका परेको हो । त्यस्तै नानोको विषयमा अहिले सबै नेपालीलाई जानकारी भइसकेको छ । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा सस्तो मूल्यको कार हो । त्यस्तै, जीप सेग्मेण्टमा पनि सुमो चर्चित छ । नेपालको ग्रामीण भेगका धेरै सडकमा सुमो गुड्ने गर्छ । त्यसैले पनि नेपालमा जीप भनेको नै सुमो हो भन्ने भइसकेको छ । यो नेपालकै सबैभन्दा बढी विक्री हुने युटिलिटी भेहिकल हो ।
विगतको तुलनामा अटोमोबाइलको बजार घटेको हो ?
सन् २००९/१० मा अटोमोबाइलको बजार उच्च थियो । उक्त समयमा रियल इस्टेटको व्यवसाय पनि उच्च थियो । तर, रियल इस्टेटमा आएको कमीले अटोमोबाइलको बजारलाई पनि असर पुर्‍यायो । सन् २०११/१२ मा अटोमोबाइलको बजार खुम्चिन पुग्यो । तर, अब भने अटोमोबाइलको बजार बढ्छ । वित्तीय संस्थाको ब्याजदरले गर्दा पनि व्यवसाय केही बढ्ने आशा छ । हामीसँग अहिले सबै रेञ्जका गाडी उपलब्ध भएकाले बजार बढ्ने निश्चित छ ।
अटोमोबाइलको उपत्यकाबाहिर र भित्रको बजार अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण अटोमोबाइलको बजार हेर्ने हो भने उपत्यकाको खपत करीब ७० प्रतिशत रहेको छ । तर, टाटाको बजार भने उपत्यकाभित्र ६० र बाहिर ४० प्रतिशत रहेको छ ।
सिप्रदीले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको विक्रीपछिको सेवा कस्तो छ ?
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च प्रकृतिको सर्भिस टाटाले ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । नेपालका अधिकांश मुख्य शहरमा टाटाले सर्भिस सेण्टर सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीले सबै सर्भिस सेण्टरबाट एउटै गुणस्तरको सेवा उपलब्ध गराउँछ । कम्पनीसँग हरेक समय टाटा गाडीका सम्पूर्ण पार्ट्स उपलब्ध रहन्छन् । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका स्पेयर पार्ट्स कम्पनीमा सधैं स्टक रहन्छन् । हामीले नेपालभर १४ ओटा सर्भिस सेण्टर तथा १० ओटा सेल्स आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।